3.1.१ मिलियन रूसी नागरिकहरूले pण चुक्ता नगरेकोमा रुस छोड्न प्रतिबन्ध लगाए
घर » अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटक समाचार » रूस यात्रा समाचार » 3.1.१ मिलियन रूसी नागरिकहरूले pण चुक्ता नगरेकोमा रुस छोड्न प्रतिबन्ध लगाए
जनवरी र मार्च २०२१ को बीचमा, बेलिफले deb.१ मिलियन भन्दा बढी रकम जारी गरे debणीहरुलाई रुस गर्न रोक्न
यात्रा प्रतिबन्ध लागू हुन सक्छ जब एक व्यक्तिको debtण 30,000 रूबल भन्दा बढी (bles 406)
बाल-समर्थन देनदारहरूले तिनीहरूको leavingण १०,००० रूबल ($ १10,000) पार गरेपछि देश छोड्न बाधा पुर्‍याउँछन्।
यस वर्षको सुरुमा कुल 3.8. XNUMX. लाख रूसी नागरिकहरूले यात्रा प्रतिबन्धको सामना गरे
रुसको अनुसार संघीय बेलीफ सेवारूसी संघका million० लाख भन्दा बढी नागरिकहरूलाई उनीहरूको delणको कारण देश छोड्न प्रतिबन्ध लगाइएको छ।
संघीय बेलीफ्स सेवा भन्छ कि सामान्यतया जो बालबालिका समर्थन, loanण र उपयोगिता haveण छ उनहरु मा यात्रा प्रतिबन्ध लगाइन्छ। गत वर्ष त्यस्ता fromणीहरूबाट १२० अरब रूबल (१.120 अरब डलर) संकलन गरिएको थियो।
हालको तथ्या shows्कले देखाउँदछ कि जनवरी र मार्च २०२१ बीच, बेलिफले leaving.१ मिलियन भन्दा बढी रकम जारी गरे debणीहरुलाई रुस गर्न रोक्न। यिनीहरूका करिब २२2021,००० जति नियमहरूमा बाल-समर्थन भुक्तानीको हदसम्म सरोकार छ। तीन महिनामा torsणकर्ताहरूबाट नौ अरब रुबल (१२२ मिलियन डलर) जम्मा गरियो। यस वर्षको सुरुमा कुल 3.1..225,000 मिलियन मानिसहरूले यात्रा प्रतिबन्धको सामना गरे।
रसियामा बेलिफसँग ट्राभल ब्यान लगाउने अधिकार छ जब कुनै व्यक्तिको debtण ,30,000०,००० रूबल ($ 406०10,000) भन्दा बढी हुन्छ। ती बच्चालाई समर्थन भुक्तान गर्ने बच्चा ण १०,००० रूबल ($ १135) पार गरेपछि देश छोड्ने प्रतिबन्ध लगाउन सकिन्छ।